ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အပေါ် လေးစား မှု ရှိတဲ့ ဇနီး သည်အကြောင်း ပြောလာ တဲ့ လင်းလင်း .... - Myitter
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အပေါ် လေးစား မှု ရှိတဲ့ ဇနီး သည်အကြောင်း ပြောလာ တဲ့ လင်းလင်း ….
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေ မယ့် ဗုဒ္ဓဘာ သာ အပေါ် လေးစား မှု ရှိတဲ့ ဇနီး သည်အကြောင်း ပြောလာ တဲ့ လင်းလင်း
ခ ရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် လေးစားမှုရှိတဲ့ ဇနီးသည်ချစ်သုဝေအကြောင်း ပြောလာတဲ့ လင်းလင်းအဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံက ခိုင်မာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးစားယုံကြည်မှုတွေနဲ့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်းက ကိုးကွယ် ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာချင်း မတူညီကြ ပေမယ့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ အချင်းချင်း လေးစားမှုရှိကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း လင်းလင်းက ချစ်သုဝေရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေးစားမှုရှိတဲ့ပို့စ်လေးကို ရှဲပြီး ချစ်ဇနီးရဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောပြ ထားပါတယ်။
“ကျွန်တော် တို့ရပ်ကွက် မန္တလေး ၂၇ လမ်း ဟေမာဇလရပ်ကွက်မှာ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားဝင်းရှိတယ်။ ဘုရားဝင်းရဲ့ အဝင် မုခ်ဦးနဲ့စောင်းတန်း ကို ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က လှူဒါန်းကြတယ်။
အဲဒီမှာ အားလုံးပြီး လို့ တရားနာပြီး အလှူရေစက်ချတော့ ရေစက်ခွက် တစ်ခွက်ကို ကိုယ်ရှေ့မှာယူပြီး ရေစက်ချတယ်။ သူ့ရဲ့လက်က ကျွန်တော့လက်ပေါ် ရောက်လာပြီး အတူတူ ရေစက်ချဖြစ်တယ်။
မိန်းမ ရဲ့ ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး အဲဒီအဖြစ်အပျက်လေးကို ချက်ခြင်းသွား သတိရမိတော့ သူ့ကိုအားနာမိပါရဲ့။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
လင်းလင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံ ကြည်သူဖြစ်ပြီး ချစ်သုဝေက ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာမှထွေထွေ ထူးထူးညှိယူနေစရာ မရှိတာကို ပရိသတ်ကြီးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။
ခရဈယာနျ ဘာသာဝငျတဈယောကျ ဖွဈပေ မယျ့ ဗုဒ်ဓဘာ သာ အပျေါ လေးစား မှု ရှိတဲ့ ဇနီး သညျအကွောငျး ပွောလာ တဲ့ လငျးလငျး
ခ ရဈယာနျဘာသာဝငျ တဈယောကျဖွဈပမေယျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာအပျေါ လေးစားမှုရှိတဲ့ ဇနီးသညျခဈြသုဝအေကွောငျး ပွောလာတဲ့ လငျးလငျးအဆိုတျော လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ ဇနီးမောငျနှံက ခိုငျမာတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ၊ တဈယောကျကိုတဈယောကျ လေးစားယုံကွညျမှုတှနေဲ့ သာယာပြျောရှငျတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို တညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြသုဝနေဲ့ လငျးလငျးက ကိုးကှယျ ယုံကွညျတဲ့ ဘာသာခငျြး မတူညီကွ ပမေယျ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ အခငျြးခငျြး လေးစားမှုရှိကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာလညျး လငျးလငျးက ခဈြသုဝရေဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာကိုလေးစားမှုရှိတဲ့ပို့ဈလေးကို ရှဲပွီး ခဈြဇနီးရဲ့အကွောငျးကို အခုလိုပဲပွောပွ ထားပါတယျ။ “
ကြှနျတျော တို့ရပျကှကျ မန်တလေး ၂၇ လမျး ဟမောဇလရပျကှကျမှာ ဆုတောငျးပွညျ့ ဘုရားဝငျးရှိတယျ။ ဘုရားဝငျးရဲ့ အဝငျ မုချဦးနဲ့စောငျးတနျး ကို ကြှနျတျောတို့ လငျမယားနှဈယောကျ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျက လှူဒါနျးကွတယျ။
အဲဒီမှာ အားလုံးပွီး လို့ တရားနာပွီး အလှူရစေကျခတြော့ ရစေကျခှကျ တဈခှကျကို ကိုယျရှမှေ့ာယူပွီး ရစေကျခတြယျ။ သူ့ရဲ့လကျက ကြှနျတော့လကျပျေါ ရောကျလာပွီး အတူတူ ရစေကျခဖြွဈတယျ။
မိနျးမ ရဲ့ ဒီပိုဈ့ကိုဖတျပွီး အဲဒီအဖွဈအပကျြလေးကို ခကျြခွငျးသှား သတိရမိတော့ သူ့ကိုအားနာမိပါရဲ့။” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။
လငျးလငျးက ဗုဒ်ဓဘာသာကို ကိုးကှယျယုံ ကွညျသူဖွဈပွီး ခဈြသုဝကေ ခရဈယာနျဘာသာကို ကိုးကှယျယုံကွညျသူဖွဈပမေယျ့ သူတို့ဇနီးမောငျနှံ နှဈယောကျကွားမှာ ဘာမှထှထှေေ ထူးထူးညှိယူနစေရာ မရှိတာကို ပရိသတျကွီးလညျး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူး အထူးတငျရှိပါတယျ။
ယနေ့မနက် သေချာတဲ့ အဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက် တောငပြေါ ပွောကဆြုံးနသေောကောငမြလေး အားလုံးကှိုးစားရှာဖှနေ ….
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေ မယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အပေါ် လေးစား မှု ရှိတဲ့ ဇနီး သည်အကြောင်း ပြောလာ တဲ့ လင်းလင်း ….